DAAWO:-Odayaasha Hawiye oo udacwooday Rooble | Wardoon
Home Somali News DAAWO:-Odayaasha Hawiye oo udacwooday Rooble
DAAWO:-Odayaasha Hawiye oo udacwooday Rooble
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay kulan ay odaysha dhaqanka beelaha Hawiye la yeesheen ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Kulankaas waxay odayaashu ugu gudbiyeen Ra’iisul wasaaraha tabashooyinka ay beelaha Hawiye ka qabaan siyaasadda dalka, sida ay waxgaradku warbaahinta la wadaageen.
Nabadoon Maxamed Xasan Xaad guddoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye oo kulankaas ka hadlay ayaa sheegay in ra’iisul wasaaraha ay kala hadleen arrimo badan.
Sidoo kale Nabadoon Xaad ayaa sheegay inay ra’iisul wasaaraha la wadaageen warqad ay ku qoranyihii waxyaabaha ay tabanayaan beelaha Hawiye ee dowladda looga baahanyahay inay wax ka qabato.
Odayaashaan ayaa dalbaday in dib loogu laabto guddiyada doorashada oo ay sheegeen in ay ka buuxaan ciidamo iyo shaqaale dowladeed oo aan dhax-dhexaad noqon Karin.
Sidoo kale waxay dalbadeen in la joojiyo cadaadiska lagu haayo siyaasiinta Hawiye iyo bulshadaba lagana fogaado qorshaha ay Villa Somalia ku dooneyso in ay ku fujiso boorarka musharaxiinta Hawiye, xili dhowaan laga fujiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Wararka aan helnay ayaa sheegeysa in odayaasha ay sidoo kale walaac ka muujiyeen ciidamo laga keenay Eritrea oo Soomaali ah iyo ciidan kale oo ajnabi ah, kuwaas oo ay ka qabaan cabsi ah in dalka lagu geliyo dagaalo sokeeye iyo in lagu sameesto dano gaar ah.
“Kulan dheer iyo falanqeyn kadib, waxaan ku balanay in gogoshan aysan xirmi doonin ilaa inta laga xalinayo cabashada aan u gudbinay dowladda, oo u badan rasida taalla gobolka Banaadir iyo wal-walka aan ka qabno doorashada dalku gelayo,” ayuu yiri Nabadoon Xaad.
“Xaqiiqdii hadaan nahay odayaasha beelaha Hawiye cabashadii aan qabnay waan la wadaagnay ra’iisul wasaaraha, isaguna waa nala hadlay, walaac badan oo aan qabnayna waa uu daaweeyey, erayadiisii waxaa ka mid ahaa ‘war aniga wax kale meesha uma joogee, adinkaan qowsaar idiin ahaye, miyaadnaan igu kalsooneyn ayuu nagu yiri’ marka xaqiiqdii meeshu ma marna oo ragbaan noogu jira, hadana beelahan waxa ay ka baqayaan waa wax jira oo meesha siyaasadbaa lagu jiraa,” waxaa sidaas yiri mid ka mid ah odayaashii goobta ka hadlay.
Previous articleQoysas Guryahooda lagu burburiyay Afgooye oo Farmaajo eedeeyay +VIDEO
Next articleDoorasho aynaan raali ka noqon Muqdisho laguma qaban karo+VIDEO
DAAWO C/RAXMAAN CIRRO “KALIGII TALIS HA DHACO ,WAANA SII WADEYNAA DIBAX...
Madaxwayne Xaaf oo caawa ku hoyanaya Madaxtooyada Cadaado +SAWIRRO